ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9320 / 9220 Curve — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9320 / 9220 Curve
It inezingxenye ezimbili aphelele. ukuvikelwa Maximum and mklamo ongavamile!
Cover ezimangelengele perforated for BlackBerry 9320 / 9220 Curve — kuyindlela enhle ukuvikela smarfon kusuka ezingezinhle namathonya zangaphandle. Case siqukethe izingxenye ezimbili zokuphepha: obukhulu abicah base, omuhle ukushaqeka ukumuncwa futhi elula plastic Uhlaka, ekuvikeleni eyengeziwe.
Awunayo ukujwayela izimo ezintsha zomsebenzi ngefoni, njengoba kwenzeka has zonke izimbobo ezidingekayo (ezixhumi, ikhamera bese flash), enamathela ekhethekile usebe izinkinobho, futhi ikhibhodi screen zingavuiwa. Ikhava Ubuye kunesikhala for logo wakho — BlackBerry ahlale liyabonakala. Izingxenye cover ngokuphephile eduze komunye nomunye, sibonga design ekhethekile. Silicone-based ekhiqizwa ngqo ifremu, futhi ine ikhefu, impela siphinda ezakheke.
Case ivikela hhayi kuphela smartphone yakho, kodwa futhi agcizelela ubuntu bakho! Isakhiwo eyingqayizivele perforated izingxenye plastic lihambisana smooth abicah ukuthungwa ubukeka kakhulu. Phambi ezahlukene imibala.
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9320 / 9220 Curve, Black / Black 9320CASE-VN-BK ●
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9320 / 9220 Curve, White / White 9320CASE-VN-WT ●
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9320 / 9220 Curve, Black / Red 9320CASE-VN-BKRD ●
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9320 / 9220 Curve, Blue / Blue 9320CASE-VN-BU ●
ezimangelengele ikhava perforated for BlackBerry 9320 / 9220 Curve, Lilac / Fuchsia 9320CASE-VN-LF ●
Black / Red 9320CASE-VN-BKRD